Masuuliyiinta Turkiga oo rumaysan kiimiko in lagu qariyay maydka Kashoggi kadib dilkiisa – Radio Daljir
Noofember 3, 2018 4:40 b 0
Masuuliyiinta dowladda Turkiga ayaa rumaysan in kiimiko loo adeegsaday qarinta maydka wariyaha Sacuudiga u dhashay ee lagu dhex dilay gudaha qusuliyadda Sacuudi Carabiya ee magaalada Istambuul ee dalka Turkiga.
La taliyaha madaxwaynaha Turkiga Yasin Aktay ayaa u sheegay wargayska Huriyat in maydka Kashoggi la jarjaray kadibna lagu shubay kiimiko, waxaana uu sheegay cadaymaha ay hayaan inay ka mid tahay in lagu dhex daadiyay qayb ka mid ah beerta guriga qunsulka ee magaalada Istambuul, halka qayb kallena lagu shubay ceel ku yaala guriga qunsulka, iyadoona masuuliyiinta qunsuliyadda ay diideen in ceelka la baaro.
“dilka Khashoggi sababta ay u jarjareen meydkiisa waxa ay ahayd si ay u fududaato in kimikadaas dhaqso loogu baabi’iyo” ayuu yiri Aktay.
Madaxwaynaha Turkiga Rajeb Tayyib Erdogan oo goor sii horaysay ka hadlay dilka ayaa waxaa uu sheegay inay amreen masuuliyiinta dowladda Sacuudiga Carabiya, loogana baahanyahay jawaab degdeg ah.
Dilka suxufiga Kashoggi oo caan ku ahaa maqaalo ka dhan ah dowladda Sacuudiga ayaa dunida u kala qaybisay laab garab, waxaana dowladaha waawayn ay muujiyeen inay taageersanyihiin dowladda Sacuudi Carabiya oo uu kala dhaxeeyo heshiis dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda ah.